Cuba oo Madaxweyne Cusub Yeelaneysa
Madaxweyne ku xigeenka koowaad, Miguel Diaz-Canel, ayaa Arbacadi loo magacaabay musharraxa kaliya ee xilkaan u taagan. Hannaanka doorashada oo ka dhici doonta golaha baarlamaanka ayaa lagu wadaa in maanta lasoo gaba gabeeyo.
Dowlada Mareykanka ayaa walaac ka muujisay qaabka doorashadani ay uga dhaceyso Cuba. Afhayeenka waaxda arrimaha dibadda Mareykanka, Heather Nauert, ayaa sheegtay in maamulka Trump uu ka wal-wal-san-yahay hannaanka doorashada oo ay sheegtay in aysan aheyn mid dimoqraadi ah.
Madaxweynaha cusub ayaa xilka kala wareegi doona Raul Castro oo ah 86 sano-jir. Castro ayaa xakumay Cuba 10-ki sano ee lasoo dhaafay. Wuxuu xilka kala wareegay walaalkiis, madaxweynihi hore ee Cuba, Fidel Castro oo Cuba xakumayay inti u dhaxeysay 1959 ilaa 2006.